“Weligey ma arag laacib sida Erling Haaland oo kale ah.” – Marco Reus – Gool FM
“Weligey ma arag laacib sida Erling Haaland oo kale ah.” – Marco Reus
Dajiye March 23, 2021
(Borussia) 23 Maaro 2021. Kabtanka kooxda Borussia Dortmund ee Marco Reus ayaa ammaan kala dul dhacay saaxiibkiis Erling Haaland, isagoo carabka ku adkeeyay inuu yahay xiddigii ugu fiicnaa uu kaga garab ciyaaray maaliyada Borussia.
Marco Reus ayaa wareysi uu ku bixiyay “Kicker” wuxuu ku ammaan saaxiibkiis Erling Haaland, wuxuuna yiri:
“Waligey kuma arkin kooxda xiddig sida Erling Haaland oo kale ah, waa mid gaar ah.”
“Wuxuu si fiican u yaqaanaa sida loola dhaqmo kubadda, guulaha uu gaaro iyo goolasha uu dhalinayo inay u caawineyso kooxda si aan caadi aheyn.”
Si kastaba ha noqotee, Weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa lagu soo warramayaa inuu xagaagan ka tagi karo kooxdiisa, xilli xiiso badan uu ka helayo qaar ka mid ah kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub.
Real Madrid, Barcelona iyo labada Manchester ayaa diiradda saaraya saxiixa xiddigan suuqa xagaaga ee nagu soo fool leh, waxaana hadda soo baxaya akhbaar farxad gelineysa kooxaha xiiseynaya laacibkan.
Portugal, France, Belgium, Holland, Mali, Uganda, Ethiopia & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono isreeb-reebyada Koobka Adduunka iyo Kan qarammada Afrika